Mamelona Indray Ny Teny Yekuana Heverina Ho Ampianarina Any Amin’ny Anjerimanontolo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2015 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, Ελληνικά, Français, Español
Saúl López, mpanoratra ny voka-pikarohana (tezy) momba ny fifandraisana eo amin'ny teny, torohay ary ny teknolojiam-pifandraisana. Nahazoana alalana.
Lehilahy tanora Yekuana i Saúl López, na Kuyujani (anarany teratany), izay nanokana ny ankamaroan'ny fiainany tamin'ny fianarana ny zavamisy eo anivon'ny vondrona ara-poko misy azy. Tamin'ny resaka niarahany tamin'ny zokiolona sy ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina, nanjary nahafantatra izy fa ny iray amin'ireo olana goavan'ny vondrona dia andalam-pahaverezana ny teny Yekuana . Manoloana izany toe-javatra izany, nanapa-kevitra hampihatra ny fitiavany manokana ny media sy ny teknolojia amin'ny tetikasa voka-pikarohana momba ny teny Yekuana izy.
Olona vazimba teratany avy amin'ny fianakaviana Cariban, fantatra koa amin'ny hoe Maquiritares na Makiritares ny Yekuanas, izay monina ao an-tampon'i Caura, Erebato, sy ny renirano Nichare, ary ny tampon'i Ventuari, Parú, sy ny reniranon'i Cuminá ao Venezoela ny ankamaroany. Vinavinaina ho eo anelanelan'ny 5.000 ka hatramin'ny 10.000 ny mponina ao ankehitriny.
Tao anatin'ny dimy taona farany, mpianatra tao amin'ny Oniversite Nasionaly Fikarohan'ny Indizeny ao Tauca (UNEIT) ao Venezoela i Saúl, oniveriste naorin'ny fikambanana miaro ny zon'ny indizeny miara-miasa amin'ny pretra Zezoita. Hatramin'ny nidirany tao amin'io oniversite io, liana manokana amin'ny media sosialy sy ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampitam-baovao izy. Matetika izy hita manodidina ny toeram-pianarana – miaraka amin'ny fakantsary eny an-tanana – mandrakitra ny fampianarana, fivorian'ny mpianatra, hetsika ara-kolotsaina, miantsafa, ary manatontosa fampitàna an'ohatra ny lalao baolina isan'Alahady ataon'ny mpianatra indizeny mihitsy aza.
Sarintanin'ny Fanjakana Venezoelana Bolívar, toerana fanaovana asa fanadihadiana.
Ny voka-panohanana fikarohana ataony, mitondra ny lohateny hoe “ny herin'ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana (TIC) amin'ny teny Ye'kwana. Trangan'ny vondrom-piarahamonina Jüwütünña do Alto Erebato – Fanjakana Bolivar,” dia manadihady ny fifandraisana misy eo amin'ny teknolojia vaovao sy ny zavamalaza amin'ny tontolon'ny fifandraisan'ny kolontsaina Yekuana (indrindra avy amin'ny fomba fijerin'ny tanora ao amin'ny fiarahamonina). Eo amin'ny dingana farany amin'ny fanitsiana ny voka-panohanana fikarohana izy amin'izao fotoana izao, ka mbola tsy navoaka izany.
Fandraisana anjara goavana amin'ny famelomana indray ny teny Yekuana ny fikarohana, satria manome angona goavana momba ireo fandinihana sy hevitra mikasika ny lanjan'ny teny eo amin'ny vondrom-piarahamonina teratany, izay eo anelanelan'ny renirano Caura hatrany amin'ny lemaky ny reniranon'i Ventuari. Ahitana resaka sy tafatafa teo amin'ny beantitra sy ny solontenan'ny zokiolona eo amin'ny tontolon'ny Yekuana ny sangan'asany, sy resaka tamin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana, fanabeazana sy ny teknolojia, mahatonga ny fikarohana ho manana fomba fijery iraisa-taranja goavana maro sy maro kolontsaina.
Nizara tamin'ny Global Voices mikasika ny dikan'ny fikarohana ataony i Saúl;
Mahaliana tokoa ilay asa. Afaka ni-karajia nandritra ny ora maro tamin'ireo zokiolona avy amin'ny vondro-mpiarahamoniko aho ary mahafantatra ny ampahan'ny tantaran'ny fiarahamoniko – zavatra izay tsy fantako taloha ary voarakitra ao anatin'ny voka-pikarohako amin'izao fotoana izao.
Raha mikasika ny maha-zavadehibe ny teny Yekuana, dia hoy izy:
Am-bava indrindra indrindra ny fototry ny kolontsainay. Ny maha-anay rehetra amin'izao fotoana izao, dia avy amin'ny teninay, izay votoatin'ny kolontsainay amin'ny ankapobeny. Zava-dehibe ny mahatakatra an-tsaina fa ny teknolojia sy ny haino aman-jery dia azo ampiasaina hanompo ny fiarahamoninay sy ny fijery ny tontolo taka-maso, mamelona sy miaro ny teninay amin'ny alalan'ny fandraketana sy ny fanoratana ny tantaranay, ny anganonay ary ny fomba amam-panaonay – mazava ho azy amin'ny fanabeazana ny taranaka mbola tanora.
Nampahafantatra ny fikarohana nataony tamin'ireo zokiolona sy olon-kendry avy amin'ny vondrona ara-poko isan-karazany i Saúl tamin'ny 13 Oktobra, izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny Herinandron'ny Fijoroana Indizeny 2015 tontosaina isan-taona ao amin'ny toeram-pianarana ao amin'ny Oniversite Nasionaly Fikarohan'ny Indizeny ao Tauca. Niaraha-nankatoavina ny voka-pikarohana.
Tafiditra ao anatin'ny sampam-pianarana ao amin'ny UNEIT i Saúl amin'izao fotoana izao ary efa mikarakara atrikasa fiofanana ao amin'ny vondrom-piarahamonina teratany sasany ao atsimon'i Venezoela. Hoy izy:
Ny tanjona dia ny hanamaroana [ity fikarohana] ity ary ampahafantatra ireo vondro-poko hafa mikasika ny maha zava-dehibe ny teny indizeny ary mitady fomba fiasa ahafahantsika miaro azy ireo sy hamelona azy ireo.